Avy amin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana
"(Hoy Jesosy:) Fa avy ny andro izay handrenesan’ny olona rehetra any am-pasana ny feony (ny feon’ny Zanak’Andriamanitra); dia hivoaka izy: izay nanao tsara dia ho any amin’ny fitsanganana ho fiainana; fa izay nanao ratsy kosa dia ho any amin’ny fitsanganana ho fahamelohana." Jaona 5:28,29
Ao amin’ny Baiboly, ny hoe “maty” ara-panahy, dia midika hoe tsy manana fifandraisana amin’Andriamanitra. Ny rain’ilay zanaka adala, raha nahita azy niverina tany aminy, dia niteny hoe: “Ity zanako ity efa maty, fa velona indray” (Lioka 15:24). Hamafisin’ny apostoly Paoly fa “matin’ny fahadisoana ... isika” (Efesiana 2:5). Izany koa no hevitry ny teny nolazain’i Jesosy hoe: “Avy ny andro ary tonga ankehitriny, izay handrenesan’ny maty ny feon’ny Zanak’Andriamanitra; ary izay mandre dia ho velona” (Jaona 5:25). Raha mino ny Tenin’Andriamanitra aho, dia hisy fiovana lalina ato anatiko, fiovana mampifindra ahy hiala amin’ny fahafatesana ara-panahy ho amin’ny fiainan’Andriamanitra. Izany no fahateraham-baovao (Jaona 3:7).
Resahin’ny Baiboly amintsika koa ny fifindrana iray hiala amin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana, fifindrana ara-batana, dia ny fitsanganan’ny maty. Araka ny ambaran’ny andinin-tSoratra Masina androany, ny olona rehetra izay maty dia hitsangana avokoa indray andro any, saingy tsy amin’ny fotoana miaraka :
- ny mino aloha, izay hitsangana ho amin’ny fiainana; handray tenam-boninahitra tahaka ny an’i Jesosy Kristy izy ireo (Filipiana 3:21) "Izay hanova ny tenan’ ny fietren-tenantsika ka hitovy endrika amin’ ny tenan’ ny voninahiny, araka ny fiàsan’ ny heriny, izay ahaizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho Azy."
- manaraka izany, dia hisy ny fitsanganana “ho fahamelohana”, izay hahakasika ireo izay nandà ny hafatra mitory ny famonjena. Hipetraka eo amin’ny sezafiandrianana fotsy lehibe ny Mpitsara, ary ireo izay hiseho eo anatrehany dia hotsaraina araka ny asany (Apokalypsy 20:11,12). Fotoana miezinezina izany, ho an’ireo izay nanao tsinontsinona, fahavelony, ny famonjena maimaimpoana mbola atolotr’Andriamanitra mandraka androany ho an’ny olona rehetra mibebaka!
Ianao ve tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana, amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy? “Izay mino ny Zanaka (ny Zanak’Andriamanitra) manana fiainana mandrakizay” (Jaona 3:36).